ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ အလိုအလျောက် ငွေဖြတ်ခံရသော ပြဿနာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ အလိုအလျောက် ငွေဖြတ်ခံရသော ပြဿနာ
ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ အလိုအလျောက် ငွေဖြတ်ခံရသော ပြဿနာ
Posted by the best on Oct 12, 2012 in Copy/Paste | 21 comments
ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ အလိုအလျောက် ငွေဖြတ်ခံရသော ပြဿနာဖြေရှင်းပေးနေပြီဟုဆို
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး၏ Server Error ကြောင့် ဂျီအက်(စ်)အမ်မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲသူများ ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသော
ဖုန်းလက်ကျန်ငွေပမာဏထဲမှ ငွေကျပ်နှစ်ထောင်ကျော်စီ အနုတ်ခံခဲ့ရသည့် ပြဿနာကို
ပြန်လည်ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ သတင်းရရှိသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ ၀၉ ၅၁ xxxxx ဖြင့်စသော ဂျီအက်(စ်)အမ်ဖုန်းများတွင်
ယခုလ ၉ ရက်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖုန်းများသို့ My Ringtune စနစ်ကို
ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ကုမ္ပဏီဘက်မှ ပေးပို့သည့် စာတိုတစ်စောင် ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်တွင်
ဖုန်းလက်ကျန်ငွေပမာဏထဲမှ ငွေကျပ်နှစ်ထောင်ကျော်စီ အနုတ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း
“ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေထဲကို သူတို့ရဲ့မိုင်ရင်းကျွန်းဝန်ဆောင်မှုကို သုံးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီး
စာတစ်စောင်ဝင်လာတယ်။ ကျွန်တော့်ဖုန်းကို အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုမထည့်ထားဘဲ အဲ့ဒီစာရောက်လာတာ။
နောက်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီ ဖုန်းခေါ်ကြည့်တာမှာ ဖုန်းကခေါ်မရတာနဲ့ မသင်္ကာလို့ လက်ကျန်ငွေကို
ပြန်စစ်လိုက်တော့ နှစ်ထောင်ကျော် အဖြတ်ခံထားရတယ်။ ဒါက မမှားသင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်”ဟု
ဖုန်းထဲမှလက်ကျန်ငွေ အနုတ်ခံလိုက်ရသည့် အဆိုပါ ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူတစ်ဦးကပြောသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသည့် အဆိုပါ နံပါတ်ကိုင်ဆောင်သူများသည်
ယင်း My Ringtune ကုမ္ပဏီဘက်သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ တောက်လျှောက်ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း
ဆက်သွယ်မှု လုံးဝမရခဲ့ဟု ၄င်းတို့က ဆိုသည်။
My Ringtune ကုမ္ပဏီဘက်မူ ယင်းအဖြစ်အပျက်သည် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးဘက်မှ
နည်းစနစ်လွဲချော်မှုကြောင့်သာဖြစ်ပြီး ဖုန်းထဲမှ ငွေနုတ်ယူခံခဲ့ရသူများကိုလည်း
ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးပြီး ဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။
အဆိုပါကိစ္စသည် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဘက်မှ server error ကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး
ဖြစ်ပွားပြီးသည်နှင့် မကျေနပ်သည့်ဖုန်းများ တောက်လျှောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း
ရတနာပုံတယ်လီဖုန်းစင်တာ၏ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဌာနမှ ဖြေကြားသည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြီး ယနေ့နံနက်တွင် ငွေနုတ်ယူခံခဲ့ရသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းများထဲသို့
တောင်းပန်သည့် စာတစ်စောင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး နုတ်ယူခံခဲ့ရသည့် ငွေပမာဏကို
My Ringtune စနစ်ဆိုသည်မှာ ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့်အခါတွင် ဖုန်းဝင်သည့် အော်တိုမြည်သံနေရာဖြစ်သော “တီ တီ တီ” ဆိုသည့်
အသံနေရာတွင် တစ်ဖက်ဖုန်းခေါ်ဆိုသူဘက်မှ နားဆင်နိုင်မည့် သီချင်းများကို ထည့်သွင်းနိုင်သည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးက မှားလိုက်ရင် သူတို့ ဖက်က အသာချည်းပဲ။
တစ်ခါမှ ပြည်သူတွေဖက်က အသာရတဲ့အမှားမရှိဘူး။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ Server က “လိပ် Server” ပဲ။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ ပညာရှင်တွေက အရမ်းတော်တယ်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဘက်ရဲ့ server error ကြောင့်လို့ ပြောနိုင်တာ သူတို့ တော်လို့ ပေါ့။
Server Error ကြောင့်လို့ ပြောတာ အကြိမ်မနည်းတော့ဘူးနော်။
နောင်ဒီလိုမဖြစ်အောင် Server အသစ်လဲသင့်လား၊ လူအသစ်လဲသင့်လား။
ထောက်ခံပါတယ်ဗျို့ ။ကျုပ်လည်းတစ်ညလုံးတစ်နေ့ လုံးဖုန်းခေါ်ပြီး
ရလည်းရရော ပိုးစိုးပက်စက်ပြောလိုက်ပြီးပြီ ။အမှန်က ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ 
ကုမ္ပဏီပေါင်းရိုက်တာ ။ ပြောသာပြော ဒါမှ သိပ်လူပါးမဝရဲမှာ
15 သိန်း G တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး … ကျွန်မတို့ 5သိန်း CDMA 800 MHz တွေလည်း … အဖြတ်ခံရပါတယ် ။ ဘာစာမှ မလာပဲ … ဘာဆားဗစ်မှ မယူထားပဲနဲ့ကို ဖြတ်သွားတာ ပြန်လည်း မရပါဘူး … ။
နေ့တော့မမှတ်မိတော့ဘူး …….. တပတ်လောက်တော့ ရှိရောပေါ့ … ညနေပိုင်း အင်တာနက်သုံးနေတုန်း connection ကျသွားတယ် … အဲ့အချိန်ဖုန်းထဲ missed call တစ်ခုမြင်လို့ ပြန်ခေါ်ပါတယ် ဖုန်းက ဘာသံမှ မကြားတော့ဘူး ။ ဒါနဲ့ … မဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့ … အင်တာာနက်မသုံးခင်ကတောင် ပိုက်ဆံစစ်လိုက်ပါသေးတယ် … ထောင်ဂဏန်းကျန်သေးတော့ .. သုံးပြီးမှ ထပ်ဖြည့်ချင်ဖြည့်မယ်တွေးထားတာ …. ။ ပိုက်ဆံက0ဆိုတော့ … နည်းနည်းတောင် လေသွားတယ် …. ။ ဒါနဲ့ပဲ … မျက်လှည့်ပြသလို ပျောက်သွားတဲ့ ဖုန်းထဲက ပိုက်ဆံအတွက် ဘယ်သူ့ကို ကျိန်ဆဲရမှန်း မသိတာနဲ့ …စိတ်တိုတိုနဲ့ပဲ … ပိုက်ဆံကဒ်ထပ်ဖြည့်လိုက်ရပါတယ် … ဟီး :hee:
ကျွန်မမဖြစ်ခင်က …ညီမ၀မ်းကွဲလေး တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် …. G သုံးနေတာပါ .. သူလည်း သုံးထောင်ကျော် .. ပါသွားတယ် … အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲ .. …
၀န်ဆောင်မှုဖြင့် မကောင်းပဲ …. ပြည်သူတွေကို ပါးပါးလှီး …. လိမ်လည် လှည့်ဖျားပြီး စားသောက်နေတာ … မုန်းစရာ …. ။
ကျွန်တော် ၀၉-၅၀——- လည်း etone အတိုင်းပဲ။
လက်ကျန်ငွေ ၄၀၀၀ကျော်ကနေ ၀ ဖြစ်သွားတယ်၊ အင်တာနက်မပိတ်မိလို့ ထင်နေတာ။
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးအသစ်လဲလိုက်ရင် server error မတက်တော့ဘူး။
လူတွေက ကိုယ်တယောက်တည်း ခံရသလား အမှတ်နဲ့ … အသံမထွက်လို့ … အချဉ်လား ဆိုပြီး .. သတ်သတ် ဘတ်တာပါ အစ်ကိုရေ … ။
ဒါတောင် အခုမှ သူတို့ဘတ်တာ လူသိတာနော် … prepaid card တွေ ပေါ်လာလို့ စစ်လို့ ရတာ .. အရင်ကလို Credit နဲ့ သုံးနေလို့ကတော့ .. ဘယ်လောက်ဖြတ်လို့ ဖြတ်မှန်း လည်း မသိ … ၊ လာထည့်ပါဦးဆို သွားထည့်ရတယ် … ၊ အရမ်း အမောင့် အများကြီး ကွာနေမှသာ details ထုတ်ကြည့်ကြတာလေ … 100မှာ 99ယောက်က details တောင်းမကြည့်တာများ တယ် … ။ တောင်းဖို့ကလည်း မလွယ်ဘူးကိုး … အဆင့်ဆင့် … အလုပ်တွေမရှုပ်ရှုပ်အောင် လုပ်ထားတာ … ။ ဂွင်ဖန်တဲ့ နေရာမှာ တကယ့်ကို ဆြာတွေပါပဲ … ။
အမလေး မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရယ် နှိပ်ဆက်နေတာလည်း၊
ဒါလည်းခုထိ စမ်းသပ်စဲ မှားပြန်ဆိုဘဲလားဟင်၊
ဆက်ရေးရရင် ကိုယ့်တွေ့လေးတစ်ခုဗျာ၊ ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ပိတ်တော့ အကြိုနေ့မှာ ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တယ်၊ အဲဒီမတိုင်မှီ ကျွန်တော်တူလေးက ညအင်တာနက်မသုံးမှီ ငွေလက်ကျန် ၅၀၀၀ ကျော်ကျန်လို့ ညဘက်သုံးနေရင်း လိုင်းမရတော့ ဖုန်းခေါ်တော့လည်း မရ ဒါနဲ့ ငွေကဒ်ထပ်ဖြည့်
သော်လည်းအင်တာနက်လိုင်းက မပွင့် ဒါနဲ့ဖုန်းဆိုင်တွေမေးကြည့်တော့ ဆက်သွယ်ရေးမှာ လိုင်းပြန်ဖွင့်ပြန်လျှောက်ရမှာတဲ့၊ ဆက်သွယ်ရေးမေးကြည့်တော့ သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ပြီးမှ လျှောက်ရမှာတဲ့၊
ကဲ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်(၁၀)ရက် ငုတ်တုတ်မေ့မယ့်ကိန်းဗျာ။ ဒါနဲ့ဘဲ ဆိုင်ရာပိုင်ရာခလုတ်တွေနိပ်တော့မှ
ပြန်ပွင့်တယ်လေ။ ဆိုလိုချင်တာက ဆက်သွယ်ဖို့ ထုတ်ပေးတဲ့ဖုန်း ဆက်သွယ်လို့ အမြဲမရတာတွေနဲ့ ထိန်းထား နေစဲ၊ အင်တာနက်လည်း တစ်မိနစ် ဘယ်လောက်ယူတယ် အဲဒီမှာ များများရအောင် ကွန်နက်ရှင်ကို လိပ်ပေါ်တင်ပြီးလွှတ်တယ် ကွန်စောင့်ရတဲ့ဖိုးက သုံးတဲ့ဖိုးထက် အခများနေတယ်၊
ဂျီ ကို ပထမထုတ်တော့ ၅ သိန်း၊ နောက်တော့ ၁၀ သိန်း၊ အဲဒီကနေ ၁၅ သိန်း ဒါတောင် လိုချင်တိုင်းမရဘူးနော် ဂွင်တွေကရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဟိုလူတွေကတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ခါးမှာကျည်ကပ်ချိတ်ထား သလားအောင့်မေ့ရအောင် ပတ်လည်ဘဲ လွှတ်တော်မှာ အမေးခံ ရတော့ သိန်းဇော်က ဈေးမြင့်နေတာ မကိုက်လို့ပါတဲ့၊ ဘာမကိုက်တာလဲ သူအိမ်ဆောက် ကားဝယ်ဖို့
မကိုက်တာလား၊ နောက်တော့ ၅ သိန်းနဲ့ ဈေးချရောင်း အခု ၂ သိန်းနဲ့ရောင်း ၊ သူများ ၅၀၀၀ နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတော့ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောလို့တားတယ်၊ ပြောတာတော့ ပြည်သူတွေအတွက် စဉ်းစားပြီးလုပ်နေ တာတဲ့၊ မှန်ပါတယ် ပြည်သူတွေအတွက်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပြည်သူဆီက ဂွင်ရိုက်ရမလဲ ဆိုတာဘဲဖြစ်မယ်ဗျာ။ Server Error က စက်တင်မဟုတ်ဘူး ဆက်သွယ်ရေးက သူတွေ လည်း Error တက်နေတာပါဗျာ။ တော်ပြီ ရေးရင်းနဲ့ ပိုစ်တစ်ခုလောက်ဖြစ်နေတော့မယ် the best ရယ် ဒီလောက်ဆို စုတ်ပြတ်သတ်ပြီး ခြစားနေတယ်ပြောရင်တောင် တောင်ပို့လိုက်ထွက်ပြီးစားနေတဲ့ ခြဘဲဖြစ်မဲ့
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက“ ခြစား” နေတာမဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက “ချစား” နေတာပါ။
ကျနော် ရေးတာ တော့ လူတိုင်းသိမှာ ပါ။
ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောပါတယ်။ ခု လည်း တောနယ် ရွာ တွေ ထိကို ဆင်ကြံ ကြံနေတယ်။
လေးသောင်းစသွင်း ပြီး အရစ်ကျ တစ်လ တစ်သောင်း နဲ့ ရောင်း နေတယ်။
တရွာ ဆယ်လုံး ရောင်း ရ ရောင်းရ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး တွေ နဲ့ ပေါင်းပြီး လုပ်နေတယ်။
အပြောကတော့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ထောက်ခံချက် နဲ့ တောနေပြည်သူတွေ ဖုန်းသုံးနိုင်အောင် စေတနာထား အကြွေးရောင်းပေးမှာ တဲ့ ဗျား။
ကျနော် တို့ မြို့နယ် ဆို ရွာပေါင်း ၁၀၁ ရွာ ( အင်္ဂလိပ်ခေတ်ထဲ က သဂျီး ၁၀၁ ပိုင် ရှိတဲ့ မြို့နယ် ပေါ့။
၁၀ x ၁၀၁ = ၁၀၁၀ x ၂၆ မြို့ နယ် ရှိတဲ့ ဧရာဝတီ တိုင်း အတွက်ဆို ၂၆၂၆၀ ရောင်း ရ လဲ မနည်းဘူးဆို ပြီး လုပ်နေ လေရဲ့။
ဖုန်းက ဈေးလျှော့ရောင်းတော့မဲ့ အချိန်ဒီလို လိမ်ညာစားသောက်ရဲတာ အံ့သြမိပါတယ်။
ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းမစွံတော့တဲ့ ဖုံး တွေကို တဖက်လှည့်နဲ့ ပါးလှည့် နားရိုက်
ခက်တာက ကျုပ်တို့နယ်ဖက်မလဲ အကြွေးသာရမယ်ဆိုရင် တိုက်နယ်ကြီးတခုပဲ
ဝယ်ရ ဝယ်ရ ယူမယ်ချည်းပဲဗျို့ …။
the best ကွ
(၃)ကြောင်းထဲနဲ့အားပေးတာ ကိုပေ လိုနေ ပါသေးတယ်။
အန်ကယ်ဂျီးရေ……… ဆက်သွယ်ရေးမှမဟုတ် အားလုံးလဲလိုက်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နော့ ဒါပေမဲ့ လေ့ကျင့်ပေးဖို့တော့ အချိန်ယူရလိမ့်မယ်…။ ခုတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို ၀န်ထမ်းပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ် ထည့်လိုက်ဗျာ…….. ဒါဆိုရင်တော့ တစ်ပြေးညီလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်…။ ခုလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေက ရှေ့ကလူလုပ်သွားတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ဆိုပြီး အမိန့်ပေးခံထားရတဲ့ စက်ရုပ်တွေနဲ့ဘာမှမခြားဘူးဖြစ်နေတယ်……။
လာသေးတယ် server error တဲ့ ပလာတာကျော်တဲ့ဒယ်အိုးလောက်မှဇောက်မနက်တဲ့ဟာတွေ………
နောက်ထပ် server error လာအုံးမှာပဲ။
server သာစကားပြောတတ်ခဲ့ရင်…. သူလေပြောပြလိမ့်မယ်
ည စ်နေမှန်းသိနေပေမယ့် ဘာမှလုပ်မရတော့ ငုံ့ခံနေရာတာပါဘဲ။